HOME | PonYate
- Rakhine State "2020 Election Results"
- Chin State "2020 Election" State Hluttaw, Amyotha Hlutaw & Pyithu Hlutaw Competitive Candidates
Starred Questions Raised by MPs
Starred Questions at Parliament
2020 Election Competitive Candidates
Voters Population Dashboard
2020 Election Cancellations
Party Size Dashboard
Ethnic Population Dashboard
To contribute to the building ofafederal nation through effective systems in accordance with international standards.
Pon Yate aims to support national organizations by teaching and using the latest technological tools to support and contribute to the research efforts of the respective organizations involved in sectors such as parliamentary reform, national governance, transparency in economics, and general social sector reform.
The Pon Yate Organization values the fundamental Human Rights and Equality of all people in Myanmar regardless of their ethnicity.
If Myanmar organizations have tools to use and share their own contextual research across civil society, government and business sectors, then they will build trust and be better informed to support their own reform process, ensuringastronger federal model that ensures durable representation regardless of their ethnicity or socio-economic situation.
နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံနှုန်းနှင့်အညီ ကောင်းမွန် ထိရောက်သော စနစ်အား ဖြင့် ဖယ်ဒရယ် နိုင်ငံ ပေါ်ပေါက်လာစေရန်။
ပုံရိပ်အဖွဲ့အနေဖြင့် လွှတ်တော်ကဏ္ဍ၊ အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍ၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍ၊ လူမှုရေး ကဏ္ဍ၊ စသည့်ကဏ္ဍများတွင် တိုင်းရင်းသားများ အားလုံး၏ အခွင့်အရေး နှင့် တန်းတူညီမျှရေး ရရှိနိုင်စေရန် နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ သုတေသန ရှာဖွေ တွေ့ရှိချက်များအား သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ သို့ မျှ၀ေပြီး အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။
ပုံရိပ်အဖွဲ့သည် တိုင်းရင်းသားများ အားလုံး၏ အခွင့်အရေးနှင့် တန်းတူညီမျှရေး ကို တန်ဖိုး ထားသည်။
ပုံရိပ်မှ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော အကြောင်းအရာများမှာ ရွေး ကောက်ပွဲများ စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်း၊ လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့် သုံးသပ် ခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊ မဲပေးခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာ ပေးခြင်း စသည့် သုတေသန ရှာဖွေ တွေ့ရှိချက်များဖြင့် ကူညီပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ပုံရိပ်သည် အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း သုတေသန ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ၊ သတင်း အချက် အလက်များ ပူးပေါင်းခြင်းနှင့် သတင်း အချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း၊ ခိုင်မာ အားကောင်းသော သတင်း အချက်အလက် စနစ်တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း အစ ရှိသည့် သင်တန်းများ ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ရုပ်မြင် သင်ထောက်ကူ ကိရိယာများ ပံ့ပိုးခြင်းကို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
© 2020 Copyright: Pon Yate